နဲနဲဆိုးတာလေး တွေ ၀တ်ရင် ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ကို ကြည့်ပြီး မဝေဖန်ကြဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ – Cele Posts
ပရိသတ် အချစ်တော် ပါးချိုင့် မင်းသမီးလေး အေးမြတ်သူ ကတော့ သွယ်လျ လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ သုံးဆယ်ကျော် အပျိုကြီးမမ လို့တောင် မထင်ရ လောက်အောင် အရွယ်တင်လှပနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေးပါ ။ လတ်တလော မှာတော့ အေးမြတ်သူတစ်ယောက် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေတဆင့် သူမရဲ့ခပ်လန်းလန်းပုံလေး တွေကို အဆက်မပြတ် မျှဝေပေးနေ တာတွေ့ရပါတယ် ။
လတ်တလော မှာတော့ သူမရဲ့မနက်ခင်း စက်ဘီးစီးတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးခဲပြီး မမြတ်လေး ခုလိုလေးတွေလည်း ဝတ်မယ်နော် ခုထက် နဲနဲ ဆိုးတာလေးတွေလည်း ဝတ်မယ်နော် ချော့တခါ ဆူ ..တလှည့် တူတူချစ်ကြတာပေါ့ရှင် ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို ချွဲ့နွဲ့ပြီး လူတယောက်ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် နဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထား ကို အဝတ်အစား နဲ့ ကြည့်ပြီး ချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်ဖို့နဲ့ အတတ်နိုင် ဆုံးတော့ လိမ္မာအောင် နေပါ့မယ်လို့လည်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
ပုတုဇဉ် မို့. မကောင်းတဲ့ အခါလည်း ဆိုးလည်း ဆိုးနိုင်တာမလို့ နားလည်ပေးကြဖို့ အတွက် ပရိသတ်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့ ပါသေးတယ် ။ မမြတ်လေးရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ဘယ်လိုပဲ ဝတ်ဝတ် အရမ်းကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေကို ရေးသားထားကြတာ တွေ့ရပါတယ် ။
နဲနဲဆိုးတာလေး တှေ ဝတျရငျ ပုံပနျးသဏ်ဍာနျ ကို ကွညျ့ပွီး မဝဖေနျကွဖို့ တောငျးဆို လိုကျတဲ့ အေးမွတျသူ
ပရိသတျ အခဈြတျော ပါးခြိုငျ့ မငျးသမီးလေး အေးမွတျသူ ကတော့ သှယျလြ လှပတဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ သုံးဆယျကြျော အပြိုကွီးမမ လို့တောငျ မထငျရ လောကျအောငျ အရှယျတငျလှပနတေဲ့ မငျးသမီးခြောလေးပါ ။ လတျတလော မှာတော့ အေးမွတျသူတဈယောကျ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာကနတေဆငျ့ သူမရဲ့ခပျလနျးလနျးပုံလေး တှကေို အဆကျမပွတျ မြှဝပေေးနေ တာတှရေ့ပါတယျ ။
လတျတလော မှာတော့ သူမရဲ့မနကျခငျး စကျဘီးစီးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှကေို မြှဝပေေးခဲပွီး မမွတျလေး ခုလိုလေးတှလေညျး ဝတျမယျနျော ခုထကျ နဲနဲ ဆိုးတာလေးတှလေညျး ဝတျမယျနျော ခြော့တခါ ဆူ ..တလှညျ့ တူတူခဈြကွတာပေါ့ရှငျ ဆိုပွီး ပရိသတျတှကေို ခြှဲ့နှဲ့ပွီး လူတယောကျရဲ့ ပုံပနျးသဏ်ဌာနျ နဲ့ စိတျနေ စိတျထား ကို အဝတျအစား နဲ့ ကွညျ့ပွီး ခကျြခငျြးမဆုံးဖွတျဖို့နဲ့ အတတျနိုငျ ဆုံးတော့ လိမ်မာအောငျ နပေါ့မယျလို့လညျး ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။
ပုတုဇဉျ မို့. မကောငျးတဲ့ အခါလညျး ဆိုးလညျး ဆိုးနိုငျတာမလို့ နားလညျပေးကွဖို့ အတှကျ ပရိသတျတှကေို တောငျးဆိုခဲ့ ပါသေးတယျ ။ မမွတျလေးရဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ ဘယျလိုပဲ ဝတျဝတျ အရမျးကိုခဈြပါတယျဆိုတဲ့ မှတျခကျြလေးတှကေို ရေးသားထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ ။